China Plastic dhureti chevhavha Mugadziri uye Mutengesi | Mestech
Kuvhara kwepurasitiki rinoshandiswa mukati mekunze uye kwekunze kwenzvimbo dzekugezesa. Zita rayo rinosiyana zvichienderana nenzvimbo uye nebasa rairi kutamba: Dhonza chivharo grille, kunaya kwemvura dome chifukidziro, padenga rekudonha chifukidzo, puru yekudonha chifukidzo, flat drain chifukidzo kana PVC Dome Grating Cover.
Iyo yepurasitiki yemvura yekuvhara gidhi yakagadzirwa nepurasitiki. Iyo yekudonhavhavhavhavha inopihwa ine akarongeka maburi kana slots akateedzana. Mapurasitiki anodhiraivha anovhara magrilles anowanzo gadzirirwa panopinda uye nzira yemukati yemadhiraini system kusefa uye kubvumidza mvura kupfuura.
Dhureni yekuvhara grilles kazhinji inogadzirwa nepurasitiki, simbi, simbi yakakandwa uye kongiri, iyo inoshandiswa zvakanyanya mukati mekunze dhiraini system yemadziva edziva uye zvivakwa zvekuvaka. Semuenzaniso: denga, chimbuzi, kicheni, balcony, dhamu, dziva rekushambira, tsvina, guta mugwagwa, nezvimwewo zvinhu zvepurasitiki grille yakareruka uye nyore kugadzirwa neforoma, uye inonyanya kushandiswa kune yemukati dhiraini system
Iyo yepurasitiki yekudonha chivharo grilles inogadzirwa neyakagadziridzwa PVC, HDP, nylon uye zvimwe zvinodzivirira-kusagadzikana zvinhu. Iyo epurasitiki gridhi inogadzirwa nejekiseni kuumbwa, iri nyore mukugadzirwa kwemazhinji uye mutengo wakaderera. Kurema kwepurasitiki grid yakajeka. Nekushandisa kwepombi yepurasitiki mukuvaka mvura nemadhiraini system, iyo grid yepurasitiki iri nyore nyore kubatana neiyo drainage pombi kuburikidza ne screw thread, ine yakanaka yekuisa chisimbiso
Roof drain gedhi repurasitiki chivharo
Plastiki nylon inonaya mvura dhayeti chifukidziro
Flat indoor drain grates
PVC dome gedhi chifukidziro
Plastic afoot jekiseni Kuumbwa kwacho:
1. Makomba nematanda ari mupurasitiki grille anogoverwa zvakawandisa, uye zvinounza kuoma kuzadza kwepurasitiki panguva yekuumbwa kwejekiseni. Iyo nzvimbo uye kukura kwegedhi kunofanirwa kuve kwakasarudzwa zvine musoro mukugadzirwa kwejekiseni muforoma, kuti uzadze nekukurumidza uye zvizere sezvazvinogona, kugadzirisa fusion tambo zvakanyanya sezvinobvira, uye kudzikisa chigadzirwa deformation.
2. Iyo jekiseni muforoma yeplastiki yekudonha chifukidzo inowanzo jekiseni kuumbwa nehukuru mvura chiteshi. Kuwedzera kugadzirwa.
3. Kazhinji, nekuda kwehukuru hukuru hweforoma, uye hombe jekiseni Kuumbwa muchina inowanzo shandiswa.
Mestechkambani inogona kuburitsa mapurasitiki ekudhiravha chifukidzo grilles jekiseni muforoma uye jekiseni kugadzirwa kwevatengi. Kana iwe uchida rumwe ruzivo kana uchida kugadzira chakuvhuvhu, ndapota taura nesu.
Pashure: Elastomer TPS vhiri jekiseni kuumbwa
Zvadaro: Zvigadzirwa zvepurasitiki pamba
Kupfapfaidza pendi yezvigadzirwa zvepurasitiki